people Nepal » दिपेन्द्र कंडेल काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्दै दिपेन्द्र कंडेल काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्दै – people Nepal
दिपेन्द्र कंडेल काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्दै
काठमाडौं ८ बैसाख – स्थानीय निकायको चुनाव नजिकिदै गर्दा जनप्रवर्धक दिपेन्द्र कंडेलले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्धारी दिन लागेको बताएका छन् । सम्बन्धित विषय पढेको विद्यार्थीलाई मात्र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर अडान राख्दै आएका कंडेलले त्यसैको शुरुवात स्वरुप आफ्नो उम्मेद्धारी दिन लागेको बताएका हुन् ।
कंडेल हाल दुवईको राजा महम्मद बिन रसिदद्धारा संचालित स्कूलमा मास्र्टस ईन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन (जनप्रशासन) मा स्नातक तहको अध्ययन गर्दैछन् । त्यसै अन्तरगत नेपालको जनप्रशासनको क्षेत्रलाई अध्ययनको विषय बनाएर अहिले नेपालमा आफ्नो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिंदैछन् ।
दिपेन्द्र पश्चिामाञ्चल क्याम्पस, काठमाण्डौको थापाथलि क्यामपस हुंदै पुलचोक क्यामपसबाट वि.सं. २०६० सालमा स्नातक तहको पढाई मेकानिकल ईन्जिनिएरिङ्गबाट सकेका हुन् । उनी पुलचोक क्याम्पसको प्रवेश परिक्षामा प्रथम हुँदै आफ्ना सम्पुर्ण पढाईलाई छात्रावृत्तिबाट सम्पन्न गरेका हुन् । केंडेलले वि.सं. २०५७ सालमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा अखिल प्यानलबाट सदस्यमा समेत आफ्नो उम्मेद्धारी दिएका थिए ।
राजनीतिको कारण धेरै पकट फेल भएको गुनुसो व्यक्त गर्दै विद्यार्थी राजनीतिले देशको मुलधारको राजनीति गर्न सक्दैन र गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछन् कंडेल । उनी भन्छन्–“विद्यार्थीले यदि राजनीति गर्छ भने त्यो केवल शिक्षाको राजनीति गर्न सक्छ । विद्यार्थी राजनीति भनेको केवल विद्यार्थी हक र हीतको राजनीति हो । जस्ले सिंगो देशको राजनीति गर्न मिल्दैन ।”
स्याङ्जामा जन्मिएका कंडेल हाल काठमाण्डौ बानेश्वरको स्थायीबासी हुन् । कंडेलका अनुसार मानिस जुन ठाउँमा जमन्छ त्यही ठाउँबाट राजनीति गर्नु पर्छ र जुन ठाउँबाट उस्को राजनीति शुरु हुन्छ त्यही ठाउँबाट उम्मेद्धारी दिनु पर्छ भन्ने राजनीति नियम गलत हो । उनी यस नियमको विपरित जान नसकेको हुनाले नै देशको विकास नभएको बताउँछन् ।
कंडेल अमेरिकाको क्यालिर्फाेनिया स्थित लिंकन युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स ईन बिजनेस एडमिनीस्ट्रेसनको डिग्री समेत लिएका छन्